Akwukwo akwukwo - Dafne Design
Home shop Tag: Akwụkwọ
Home / shop / Ngwaahịa akpadoro "Akwụkwọ"
Grey table lamp with flowers and leaves - (UL)
Ejiri ya na akwụkwọ epupụta - cm 40L x 48h - (DFL)
Ejiri eji agba acha - cm. L35 x 50h - (DFL)
Oriọna mma na epupụta - cm. L x 45 70h - (DFL)
A na-eji osisi na-acha odo odo - cm. L 45 x H 60 - (DFL)
Okpokoro oriọna nke e ji ọla kọpa mee - cm. 30 x 30 x 170h - (DFL)
Ejiri eji agba acha - cm. 40 x 20 x 70h - (DFL)
Osisi grey na ahihia oriọna - (UL)
Elu ụlọ oriọna mma na ọla kọpa epupụta - cm. 65 x 35 x 125h - (DFL)
Chandelier mma na epupụta - cm. 90 x 90 x 130h - (DFL)
Okpokoro oriọna nke a na-acha odo odo - cm. 45 x 40 x 180h - (DFL)
Okpokoro oriọna a kwadoro na epupụta - cm. 55 x 40 x 175h - (DFL)
Grey ground lamp with flowers and leaves - (UL)
Elu ụlọ oriọna mma na epupụta - cm. 130 x 30 x 130h - (DFL)